Macluumaad ku saabsan xanuunka koronavirus - Kvam herad
Fayrasta koroonada ah ee cusub (Covid-19) (PDF)
Ma in yar, ma in badan mise kala durug buuxa? (PDF)
Ku socota qofka loo sheegay in uu joogo guriga (PDF)
PDF: Ma in yar, ma in badan mise kala durug buuxa?
Barta internetka Helsenorge.no
Barta internetka ee helsenorge.no waxaad ka helaysaa warbixinaha ugu dambeeya, uguna sugan ee xanuunka koronavirus. Boggan waxaad kaloo ka helaysaa macluumaadka saxa ah ee xanuunka, talooyin, macluumaad ku saabsan calaamadaha xanuunkan lagu garto, muddada u dhexaysa marka xanuunku qofka ku dhaco illaa inta uu calaamadaha xanuunka isku arkayo, habdaawaynta xanuunka, safarrada qofka qaba xanuunka, dhacdooyinka lagu qabto meelaha dadku isugu yimaaddo iyo tallaabooyinka lagaga hortago xanuunka.
Riix barta internetka ee helsenorge.no oo ka hel macluumaadka xanuunka koronavirus-ka.
Barta internetka ee hay´adda caafimaadka dadka (Folkehelseinstituttet) fhi.no
Mar walba macluumaadka ugu dambeeya, uguna sugan waxaad ka helaysaa barta internetka ee hay´adda caafimaadka dadka(folkehelseinstituttettet) Fhi.no. Halkan waxaad ka helaysaa xanuunka, talooyin, macluumaad ku saabsan calaamadaha xanuunkan lagu garto, muddada u dhexaysa marka xanuunku qofka ku dhaco illaa inta uu calaamadaha xanuunku isku arkayo, hab-daawaynta xanuunka, safarrada qofka qaba xanuunka, dhacdooyinka lagu qabto meelaha dadku isugu yimaaddo iyo tallaabooyinka kahortagga xanuunka.
Riix oo ka hel macluumaadka xanuunka koronavirus barta internetka ee inn fhi.no.
Telefoonka warbixinaha ee Agaasinka caafimaadka (Helsedirektoratet) 815 55 015
Haddii aad halkan ka waydo jawaabta aad raadinayso, waxaad wici kartaa telefoonka warbixinaha ee Agaasinka caafimaadka. Halkaa ayaad ka helaysaa jawaabaha wixii su´aalo guud ah, sida tusaale ahaan calaamadaha xanuunka iyo meelaha xanuunku uu ku faafay.
Wac telefoonka warbixinaha ee Agaasinka caafimaadka 815 55 015.
Ma iisaga shakisantay in aad qaadday xanuunka?
Qof walba oo uu mar dhow ku dhaco caabuqa mareenada hawada ama isku arka calaamadaha kale ee xanuunka Covid-19, waa inuu is baadho. Sidoo kale dadka si hoose ula xidhiidhay qofka laga helay cudurka, iyo dadka u safray meelaha uu ku badanyahay cudurka Covid-19, waa iney is baadhaan. Is baadhitaanku waa bilaash.
Wac telefoonka Karoonaha 900 46 590 si aad u qabsato ballan. Hadii aad xanuunsantahay ama u baahantahay in lagu daawwyo, wac dhakhtarkaaga khaaska ah ama amarjensiga ka wac: 116 117.Hadaad isaga shakisantahay Korona ha tegin dhakhtarka laakin wac marka hore. Hadii aad u baahantahay caawimaad degdeg ah wac 113
Video: Ku socota qofka loo sheegay in uu jooga guriga
Sist endra23.11.2020 10:38